चीनसँग सम्बन्ध बढाउँदै फोरम…. – पुरा पढ्नुहोस्……
चीनसँग सम्बन्ध बढाउँदै फोरम….
काठमाडौं – संघीय समाजवादी फोरम नेपालका १५ जना नेताहरु आइतबार चीन भ्रमणमा जाने भएका छन् । चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको निमन्त्रणमा फोरमका सात सांसद र आठ केन्द्रीय सदस्य त्यसतर्फ जान लागेका हुन् । भ्रमणमा जाने सात सांसदमध्ये ४ जना प्रतिनिधिसभा, दुईजना प्रदेशसभा र एकजना राष्ट्रियसभाका छन्।
फोरमको १५ सदस्यीय टोलीको नेतृत्व उपाध्यक्ष रेणु यादवले गर्नेछिन् । प्रतिनिधिसभा सदस्यहरु रेणु यादव, प्रदीप यादव, रामबाबु यादव र सुरेन्द्र यादव, प्रदेशसभा सदस्यद्वय जयराम यादव र रणध्वज लिम्बु तथा राष्ट्रियसभा सदस्य रामप्रीत पासवान चीन जाने तय भएको छ ।
त्यस्तै केन्द्रीय सदस्यहरू अर्जुन थापा, सञ्जय सिंह, भूराज राई, रामआशिष यादव, शेषनारायण यादव, दिनेशकुमार यादव र मिलनकुमार यादव चीन जाँदै छन् । टोलीको नेतृत्व गर्दै चीन जान लागेकी पार्टी उपाध्यक्ष यादवले चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको निमन्त्रणा चुनावअघि नै आएको बताइन् । उनले भनिन्, ‘चुनावमा व्यस्त हुनुपरेकाले त्यतिबेला जान सकेनांै । अहिले जान लागेका हौं।’
मधेस केन्द्रित दललाई चीनले प्राथमिकतामा राखेको उनले बताइन् । भ्रमणका क्रममा टोलीले चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरू, चीन सरकारका मन्त्री, बेइजिङ महानगरपालिकाका प्रमुखसँग भेट गर्ने कार्यक्रम छ । सातदिने भ्रमणका लागि निस्किने टोली गोन्जाउ, गुल्याङ हुँदै बेइजिङ पुग्नेछ ।
टोलीमा सहभागी हुन लागेका सांसद प्रदीप यादवले भने, ‘चीनले नेपालसँगको सम्बन्धलाई प्राथमिकतामा राखेको देखिएको छ ।’ आजको नागरिक दैनिकमा खबर छापिएको छ ।
Prevलाइसेन्स बिक्री गर्ने यातायात कार्यालयका कर्मचारी २ लाख धरौटीमा रिहा
Nextजसले १९ वर्षको कलिलो उमेरमा मृत्युदण्ड पाईन – ‘आमा, यो संसारले मलाई १९ वर्ष बाँच्ने मौका दियो’
आजको राशिफल : बि.स.२०७६ साल चैत्र २० गते बिहीबार इश्वी सन २०२० अप्रिल २ तारीख
निरन्तर घटिरहेको सुनचाँदीको मुल्य ह्वातै बढ्यो,हेर्नुस यस्तो छ आजको भाउ।
गृहमन्त्रीको टाडो निर्देशन पछि पक्राउ पर्ने डरले पोखराका यातायात व्यवसायीको भागाभाग, गाडी नचलाउने व्यावसायी विरुद्ध सम्पत्तिको छानबिन गरि मुद्दा चलाउने तयारी (पूरा खबर हेर्नूहोस)
अभिʼनेता शिव श्रेष्ठका छोरा यस्तो हेन्डʼसम, जस्तो मान्छे उस्तै गʼज्जब मिठा कुराहरू हेर्नुस (भिʼडियो सहित)